Thenga i-Instagram Marketing Package Deal
Ngabe ufuna Ababhalisile be-YouTube bamahhala kanye nokuthandwa kwamahhala kwe-YouTube?
Ngabe ufuna ababhalisile abaningi futhi uthanda ukubandakanyeka kumavidiyo wakho we-YouTube? Faka i-URL yesiteshi sakho se-YouTube ukuze ungene ngemvume futhi uqalise!
Thola Ababhalisile be-YouTube bamahhala manje! or Thenga ababhalisile be-YouTube
Thola ababhalisile be-YouTube bamahhala, noma zama ababhalisile bethu, ukubukwa nokuthandwa ngokukhula okusheshayo!
Ukubhalisa nokungena ngemvume kuthatha imizuzwana engama-30!
Yenza kusebenze uhlelo lwethu lwamahhala oludume kakhulu futhi olusebenzayo, noma zama uhlelo olukhokhelwayo.
Bhalisa ababhalisile besiteshi sakho kanye nokunyuka kokuthandwa kwamavidiyo!
Izinhlelo Zamahhala nezikhokhelwayo
Amasu ahlanganisiwe namanani entengo ukuze ahambisane nezidingo zakho
Ababhalisile banokugcinwa Okuphansi
Indlela eya ku-Pro
Ababhalisile banokugcinwa Okuphezulu
Izindlela Ezingu-15 Zokuthola Ababhalisi Abakhulu Bama-YouTube Bebhizinisi Lakho
Uyazi ukuthi cishe babalelwa ku-1.86 billion abasebenzisi be-YouTube emhlabeni wonke ngonyaka ka-2021? Abantu abangu-18% basebenzisa i-YouTube ikakhulukazi ukulandela izinkampani nemikhiqizo.
Lezi zibalo zikwenza kucace ngokusobala ukuthi uma wena njengomnikazi webhizinisi ungasebenzisi amandla we-YouTube, ulahlekelwa yi-LOT! Okuqukethwe yividiyo kungakusasa. Kusiza ngokuzikhandla ukwandisa ukufinyelela kwakho nokwakha ukuqwashiswa komkhiqizo. Kepha ngokuncintisana okunqamulelayo, uphuma kanjani olwandle olukhulu lokuqukethwe kwamavidiyo okufinyeleleka kalula?
Kule bhulogi, siqoqe amathiphu namasu awusizo ayi-15 wokuqoqa ababhalisile be-YouTube mahhala ukuze bathathe ibhizinisi lakho baye kwelinye izinga. Ake ungene ngqo!
1. Cela Izithameli Zakho Ukubhalisa
Yize lokhu kungazwakala, ukumane ukhuthaze izithameli zakho ukuthi zibhalisele isiteshi sakho kwesinye isikhathi kungaba yikho konke okudingekayo ukuthola ababhalisile be-YouTube mahhala. Kufana ncamashi nokuthi uwafaka kanjani ama-CTAs (Call to Action) ngasekupheleni kokuthunyelwe kwebhulogi lakho, amakhasi okufika noma okunye okuthunyelwe kwezokuxhumana.
Isibonelo, ungaqala ividiyo yakho ngokucela ababukeli bakho ukuthi babhalisele isiteshi sakho uma befuna ukubona okuqukethwe okuningi okuvela kuwe ngokungaguquki.
Uma ucabanga ukuthi ukuqala ividiyo ngokubuza okubhalisile kukwenza uzithole uthengiswa, ungakwenza lokho ekugcineni kwevidiyo. Ungakhohlwa ukukhombisa ukuthi kungani isiteshi sakho sikufanele ukubhaliswa nokuqukethwe okuletha etafuleni ukuze kuzuze izibukeli zakho. Thembeka futhi ubabonise ukuthi ukuzibandakanya kwabo kusho ukuthini kuwe nokuthi kukusiza kanjani ukuthi wenze okuqukethwe okuhle kakhulu njengomdali.
2. Dala okuqukethwe okuphoqayo
Lokhu kungabonakala njengokungaqondakali kepha kusadingeka ukuthi kushiwo. Abadali abaningi be-novice be-YouTube banomuzwa wokuthi bangaba umuzwa omkhulu olandelayo we-YouTube ngokuthumela okuqukethwe okumaphakathi. I-flash yezindaba: Awukwazi! I-inthanethi igcwala ngamavidiyo nokuqukethwe kwazo zonke izinhlobo. Njengoba unezinketho eziningi ongakhetha kuzo, kufanele ukwazi ukunikeza okuthile okuhlukile kuzithameli zakho ukuze zibuke isiteshi sakho bese zisibhalisela kuso. Uma kungenjalo, bahlala benenketho yokuthuthela esiteshini esilandelayo esihle kakhulu.
Khumbula ukwenza isisekelo esibanzi ngaphambi kokucabanga ukudala ividiyo yakho elandelayo. Esikhundleni sokwenza kabusha lokho wonke umuntu akwimboni yakho akwenzayo, cabanga ngaphandle kwebhokisi bese uza nemibono yakho yokuqukethwe ehlukile. Naka ngokukhethekile imizuzwana yokuqala eyi-10 yevidiyo yakho njengoba ingayenga ababukeli bakho noma iyibeke eceleni.
3. Hlala Ungaguquguquki
Zibuze. Yisiphi isiteshi ongathanda ukusibhalisela? Lowo othumela kanye ngenyanga kuphela ukuya ku-AWOL? Noma, esinye isiteshi esithumela kabili ngesonto ngokungaguquguquki? Sonke siyayazi impendulo - sikhetha lowo ovuselela njalo isiteshi sabo ngokuqukethwe okusha kwababukeli babo. Njengomdali, izithameli zakho zilindele ukuthi uthumele ngesikhathi ukuze uzigcine uzibandakanya futhi uhehe ababukeli abasha. Lapho ababhalisi be-YouTube bakhululeka, uthola ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube. Win-win!
Ukuba nesheduli yokuthumela okuqukethwe kwakho futhi kukugcina uhlelekile futhi kuveza imiphumela. Akudingeki ukuthi uhlale uhleli phambi kwekhompyutha ukuze ube bukhoma futhi uyithumele. Ungasebenzisa amathuluzi okuphatha imithombo yezokuxhumana akuvumela ukuthi uhlele amavidiyo akho angashicilelwa ngokuhamba kwesikhathi.
4. Phromotha isiteshi sakho se-YouTube kwamanye amapulatifomu
Uma usuvele unayo iwebhusayithi, indlela enhle yokuthola ababhalisile be-YouTube bamahhala ngokusebenzisa ithrafikhi engaguquguquki kuwebhusayithi yakho. Nyusa isiteshi sakho se-YouTube kuwebhusayithi yakho. Uma usebenzisa ama-plugins afanele, izithameli zakho zingamane zichofoze inkinobho bese ziqondiswa ekhasini lakho le-YouTube ukubuka okuqukethwe kwakho. Ungacabanga nokushumeka izixhumanisi zakho ze-YouTube kokuthunyelwe kwakho kwebhulogi ukuheha abafundi bakho ukuthi bavakashele leli khasi.
Elinye iqhinga elihle ngukuphromotha isiteshi sakho se-YouTube kwezinye izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Twitter, Facebook, Instagram ne-LinkedIn. Noma nini lapho kuvela ividiyo entsha, ungabelana nge-trailer noma amazwibela ayo endabeni yakho ye-Instagram ukwakha ukulindela. Uma uqoqe inani elifanele labalandeli kulezi zingxenyekazi, futhi bayakuthanda okwenzayo, kuzoba yisikhathi nje ngaphambi kokuba babe ababhalisi bakho besikhathi eside.
5. Faka i-Watermark kumavidiyo akho
Abadali bokuqukethwe ku-YouTube bangangeza i-watermark encane kuwo wonke amavidiyo abawenzayo. Abadali bokuqukethwe abavame ukuqala kakhulu abazi nokuthi inketho ye-watermark ikhona epulatifomu. Isithonjana esincane esizulazula ekhoneni elingezansi kwesokudla samavidiyo akho. Ungayenza ngokwezifiso i-watermark yakho yomkhiqizo noma usebenzise i-watermark efana nenkinobho yokubhalisela okuzenzakalelayo ye-YouTube.
Ngeshwa, ezikhathini eziningi i-watermark yomkhiqizo ingabonwa noma ingahambisi ababukeli ukuthi bathathe noma yisiphi isenzo. Siphakamisa ukuthi unamathele kunkinobho ebomvu yokubhalisa evame ukusetshenziswa yi-YouTube. Lokhu kwenza kube lula ukuthi izibukeli zikubone, futhi maningi amathuba okuthi bazichofoze. Kodwa-ke, uma usafisa ukwenza ngezifiso, ungachofoza ukwenza ngokwezifiso kwimenyu bese ukhetha Ukubeka uphawu.
6. Nikeza amazwibela alokho okuzayo okulandelayo
Indlela enhle yokuthola ababhalisile be-YouTube mahhala ukwenza ababukeli bakho bajabule futhi babe imilutha kokuqukethwe okwenzayo. Ngoba, uma sebethanda abakubonayo, umsebenzi wakho uzokwenza konke ukukhuluma, futhi bazonamathela kokunye. Indlela ehlakaniphile edalulwa kakhulu ngabadali be-YouTube ukugcina izithameli zabo zisebenza ngokwakha ukulindela ividiyo yabo elandelayo.
Ividiyo yomculo entsha, ukwethulwa okusha komkhiqizo, isici esisha kumkhiqizo wakho, insizakalo entsha, noma ukusebenzisana okungalindelekile nenkanyezi edumile! Noma ngabe kuyini, khumbula ukuheha izethameli zakho ngokubanika icebo lokuthi ividiyo yakho elandelayo izokhuluma ngani. Uma wenza umsebenzi wakho kahle ngokwanele, ungaqiniseka ukuthi ababukeli bakho abathembekile bazobakhona ukuzobuka ividiyo elandelayo ngomoya opholile futhi bakunikeze ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube.
7. Dala izinhla zokudlalayo ukuze ugcine ababukeli bakho bebambekile
Unayo iqoqo lamavidiyo angahlelwa kangcono ngohlu lwadlalwayo? Mhlawumbe unikeza izifundo ze-accounting bese ubheka isihloko esisodwa kuvidiyo eyodwa. Noma, uneqoqo lama-webinars? Noma ngabe yini, uhlu lokudlalwayo lukuvumela ukuthi ubeke unyawo lwakho phambili ngokubonisa ababukeli bakho kunokuqhubeka kokuqukethwe kwakho. Ngokwakha uhlu lwadlalwayo, ubaqondisa ohambweni lwesikhathi eside futhi unxuse isifiso sombukeli sokuzitika ngotshwala.
Enye inzuzo yohlu lwadlalwayo ukuthi bandise isikhathi sokubuka sesiteshi sakho. Amavidiyo aqhubeka nokudlala kumodi ye-'AutoPlay 'ngokulandelana okuchazwe ngaphambilini. Lokhu kufana ncamashi nendlela isizukulwane seminyaka eyizinkulungwane esivame ukungena ngayo ochungechungeni lweNetflix. Ngohlu lwadlalwayo lwe-YouTube, uzokwazi ukufeza isifiso esifanayo sokuzitika ngomphumela kanye nemiphumela, unikeze isiteshi sakho izizathu eziningi zokuhlanganisa ukuthandwa kwama-YouTube mahhala.
8. Sebenzisa Amakhadi Nezikrini Zokuqeda Ukuphakamisa Amanye Amavidiyo
Izikrini zokuphela namakhadi kungamathuluzi anamandla enza ikholi yakho esenzweni ibe nomthelela omkhulu. Njengoba igama liphakamisa, isikrini sokugcina isithombe esiza ekugcineni kwevidiyo yakho esingasetshenziswa ukucela ababukeli bakho ukuthi babhalise. Noma, ungayisebenzisa ukwazisa iwebhusayithi yakho noma ukhombe izithameli zakho kuvidiyo elandelayo. Uma ufuna, ungabuyela emuva bese ungeza izikrini zokuphela kumavidiyo amadala asevele athunyelwe esiteshini sakho. Le yindlela enhle yokuthola ababhalisile be-YouTube mahhala nokukhulisa ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube.
Ukuze ungeze isikrini sokugcina, vele uye kumenyu engakwesobunxele yeSitudiyo Sabadali bese uqhafaza Okuqukethwe. Khetha ividiyo ofuna ukwengeza kuyo ukuphela kwesikrini. Chofoza ibhokisi lesikrini sokuphela elivela ngakwesokudla kwesikrini. Ngemuva kwalokho ungakhetha ezintweni ezine ezihlukile zokubhalisela ngokususelwe kuzinjongo zakho.
9. Ungakhohlwa Ukusebenzisana Nababukeli Bakho
Ukuthola ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube kudinga umzamo oqhubekayo kuwe. Akulula ukuwina ababukeli abasha ngenxa yomncintiswano esiwubona namhlanje. Indlela ehlakaniphile yokusebenza kulokhu ngokunikeza ababukeli bakho abakhona ukunaka okulinganayo. Bavumele bazizwe bebalulekile futhi baziswa ngokukusiza ukuthi ube ngumdali onguye. Xhumana nabo kokuthunyelwe kwakho. Phendula imibono yabo. Yazi ukuthi bathanda ini noma yini abangayithandi ngevidiyo yakho.
Uma wenza ubudlelwano obunjalo obunenjongo nezithameli zakho, kuhumusha ekuthembekeni kwesikhathi eside. Lapho uzwa iziphakamiso zabo futhi uzenza, bazizwa bezwakala futhi bahlobana nokuqukethwe kwakho kakhudlwana. Khumbula, izibukeli ezijabule zingaletha ababukeli abaningi ngokusakazwa ngomlomo nangokwabelana ngokuqukethwe kwakho nombuthano wabo wabangane.
10. Cabanga Ama-Trailers Esiteshi Woo Woo Ababukeli Bakho
Ufuna ukwazisa ababukeli bakho abasha ukuthi imayelana nani isiteshi sakho se-YouTube ngendlela elula nesheshayo? Faka - Ama-Trailers Esiteshi. Lokhu kufana nezinqola zama-movie ezinikeza isichuse kulokho okwenzayo nokuqukethwe okudalela ababukeli bakho. Ungasebenzisa ama-trailer wesiteshi ukugqamisa izinzuzo zesiteshi sakho. Khumbula ukugcina ubude obuphakathi kwemizuzwana engama-25 nengama-30.
I-trailer ingadlulisa indaba yomkhiqizo wakho, izifiso zakho nalokho ohlela ukukufeza ngesiteshi. Ingabe idinga ukukhuthaza, ukuhlekisa noma ukushaja ngokomzwelo? Noma yini okusebenzelayo futhi uvumelana nomsebenzi wakho. Kwenze kube nomthelela ukuze izibukeli ziguqulwe zibe ababhalisile kalula.
11. Dala Izithonjana Zokwezifiso ezibamba iso
Isithonjana isithombe sokubuka kuqala esisebenza njengesembozo sevidiyo yakho. Kuyinto yokuqala umbukeli angayibheka lapho eza ekhasini lakho. Sonke siyazi, ukuvela kokuqala yizimpawu zokugcina. Ngakho-ke, faka yonke imizamo yakho yokwenza isithonjana esidonsa iso esingaphezu kokuzibandakanya. Imvamisa, isithonjana sevidiyo yakho siba yisinqumo esinqumayo ukuthi umbukeli ukhetha ukudlala ividiyo yakho noma enye kusuka emphumeleni wosesho.
I-YouTube futhi idala isithonjana esizenzakalelayo samavidiyo ngokumane uthwebule isithombe-skrini esingahleliwe kuyo. Ezimweni eziningi, lokhu akukuhle ngokwanele ukushayela ithrafikhi kuvidiyo yakho bese ushukumisela umbukeli ukuthi achofoze. Siphakamisa ukuthi udale isithonjana sakho. Makube ngu-1280 x 720px njengoba imihlahlandlela ye-YouTube incoma.
I-Pro Tip: Ubuso obumomothekayo obubheke ngqo kukhamera bubonakala busebenza cishe ngaso sonke isikhathi kuzo zonke izinhlobo zevidiyo.
12. Khuthaza Ababukeli Uma Babhalisela Isiteshi Sakho
Thina bantu sithanda izinto zamahhala. 'Yini engizuzele yona?' Lokhu kuba yisizathu kwesinye isikhathi esenza singenzi noma singenzi lutho. Ngokumangazayo, lokhu kusebenza njengentelezi yokwandisa ukubukwa kwakho kwe-YouTube. Ufuna ukwandisa ukuthanda kwakho kwamahhala kwe-YouTube noma ube nabantu abaningi abazophawula kokuthunyelwe kwakho? Indlela ekhaliphile ukuqhuba umncintiswano. Tshela ababukeli bakho uma bebhalisela isiteshi sakho bese bebeka amazwana kokuthunyelwe kwakho, bathola umkhiqizo wamahhala. Noma, ikhophi esayiniwe yencwadi yakho, noma isilingo samahhala sesoftware yakho. Thola ukubhola?
Uma wethula imivuzo ngokuzibandakanya nesiteshi sakho se-YouTube ungabona ukwanda kwesikhashana kwesibalo sababhalisile kanye nokubandakanya konke. Lapho usunakiwe, bangenise ngokuqukethwe okuphoqayo okungaguquguquki, ukuze babe ababukeli bakho impilo yakho yonke.
13. Bambisana nabanye Abadali ukukhulisa ukuthandwa kwama-YouTube kwamahhala
Kungenzeka kube nemikhiqizo ku-YouTube esemabhizinisini afanayo nawe. Kungenzeka futhi ukuthi ube nezithameli ezifanayo. Kungani ungahlomuli ababukeli bomunye nomunye ngokuhlanganisa izandla futhi bazuze komunye nomunye? Isibonelo, ungacela uchwepheshe emkhakheni wakho ukuthi enze inhlolokhono nawe esiteshini sakho. Lokhu kungasiza ukuletha abalandeli babo esiteshini sakho futhi kukhulise isizinda sakho sababhalisile. Ngasikhathi sinye, ababukeli bakho abebengazi ngochwepheshe bangabhalisela nesiteshi sabo futhi uma okuqukethwe kuhambisana nabo.
Ukusebenzisana nabathonya ukubamba ama-eyeballs amaningi esiteshini sakho mhlawumbe iqhinga elidala kunawo wonke encwadini yokuthengisa futhi nokho awusoze wehluleka ukwenza umlingo wayo. Lapho izethameli zakho zibona ukusebenzisana okunjalo, kungaqhubekisela phambili izincomo eziningi noma imibono emiqondweni yabo. Bangabeka amazwana kokuthunyelwe kwakho futhi bakutshele ukuthi yibaphi abanye abaculi abangathanda ukukubona usebenzisana nabo.
14. I-Master YouTube SEO
Ukusebenza Kwezinjini Zokucinga kuqinisekisa ukuthi abantu bangabuka okuqukethwe kwakho uma bekufuna besebenzisa amagama athile angukhiye. Isibonelo, unesiteshi sokupheka ku-YouTube. Wakha ividiyo kumas sandwich owosiwe. Abantu bazoyithola kanjani leyo vidiyo uma ungasebenzisi isihloko sakho, incazelo yakho futhi usebenzise ama-hashtag afanele? Amathuluzi we-SEO anjengeGoogle Planner akuvumela ukuthi wazi amagama angukhiye aphezulu abantu abawasebenzisayo ukuthola ulwazi oluthile.
I-YouTube SEO iqinisekisa ukuthi awenzi ividiyo ngesihloko esingafunwa muntu. Noma iziqu okungekho muntu ongazithola. Uma ungaqiniseki ukuthi ungawathola kanjani amagama angukhiye afanele usebenzisa amathuluzi aku-inthanethi, funda isiteshi esincintisana naso bese ubona ukuthi yimaphi amagama angukhiye abonakala esebenza. Ungasebenzisa futhi i-YouTube Analytics ukubona ukuthi yimaphi amagama angukhiye akunikeza imiphumela emihle kakhulu.
15. Zama i-YouTube Live
Amavidiyo abukhoma asephenduke umkhuba osalokhu uhlala khona. Inani elikhulayo lezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Instagram ne-Facebook lithola lesi sici esenza kube lula ukuthi imikhiqizo ingene. Kusukela kumaseshini we-Q & A athokozisayo nama-webinars kuya kuma-tutorials aphilayo nemiboniso yomkhiqizo, kunezinto eziningi ongazihlola bukhoma ku-YouTube ukuze uthole ababhalisile be-YouTube mahhala.
Amaleveli okuzibandakanya nokwazisa ngomkhiqizo ongawakha kuseshini ebukhoma kuhlala kungenakuqhathaniswa. Noma ngabe kungukuzwakala okuluhlaza nokwendalo kwevidiyo ebukhoma noma ukungaqiniseki nenjabulo yalokho okuzokwenzeka, ukusakazwa bukhoma kufanele kukuzame. Ngaphambi kokuthi ube bukhoma, khumbula ukutshala imali kumagiye afanele nokukhanyisa ukuze ividiyo yakho ibukeke ingongoti.
Siyethemba ukuthi amathiphu angenhla angasiza ukukhuthaza umkhiqizo wakho esiteshini sakho futhi uthole ababhalisile be-YouTube mahhala. Khumbula, ayikho indlela yobukhulu obulinganayo bonke ekukhangiseni kwamavidiyo. Inqubo yokufunda njengoba uhamba kancane lapho ufunda khona okukusebenzelayo nokungasebenzi. Hlela ukudala okuqukethwe okuthakazelisayo futhi ukukuthumele ngokungaguquguquki ukwakha isisekelo sababhalisile abathembekile. Amavidiyo wezintambo zesethi efanayo kuhlu lwadlalwayo ukwenza lula ukuqhubeka. Naka nokwandisa isihloko sevidiyo yakho, incazelo nokusebenzisa ama-hashtag angadonsela abantu abaningi kokuqukethwe kwevidiyo yakho.
Uma ukumaketha kwe-YouTube kubonakala kunzima kakhulu kuwe futhi udinga usizo lochwepheshe, thina, kwa-YTpals, sisevisi yakho. Sinamathuluzi nobungcweti bokukutholela ukuthandwa kwama-YouTube mahhala ngokukhulisa ababhalisile bakho usebenzisa izixazululo ezinhle kakhulu ze-SEO namasu afakazelwe umkhakha.
Xhumana nathi ngazo zonke izidingo zakho zokumaketha ku-YouTube. Ithimba lethu elinobungcweti lochwepheshe lingajabula ukufunda ngezidingo zebhizinisi lakho futhi linikeze izixazululo ezenziwe zahambisana nezidingo zakho.
Amakhamera Angcono Kakhulu Abadali Abasha Be-YouTube
Abadali bokuqukethwe be-YouTube baqhudelana nezinkulungwane zabanye abadali ukuze badonse ukunaka kwababukeli. Ukuthola ukwabelana kwamahhala kwe-YouTube namazwana e-YouTube amahhala kungaba nzima....
I-25th Meyi 2022
Izindlela ezi-5 eziphezulu zokuthola ababukeli ukuthi babeke amazwana kumavidiyo akho e-YouTube
Abadali bokuqukethwe be-YouTube basebenza ngesu labo le-SEO ukuze bahlanganise izimbangi zabo futhi bathuthukise izinga labo le-YouTube. Ngenkathi ukala amavidiyo, i-algorithm ye-YouTube nayo ithatha isibukeli...
I-16th Meyi 2022
Izindlela ezihlakaniphile zokusebenzisa i-YouTube njengenkundla yokumaketha
Ngokusebenzisa amandla okubandakanyeka namandla okuguqula okuqukethwe kwevidiyo, ungavula amathuba amakhulu okuthengisa umkhiqizo ku-YouTube. Njengoba iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu, ephethwe yi-Google...
Izikhungo Ababhalisile be-YouTube abangu-50 ($ 20) Ababhalisile be-YouTube abangu-100 ($ 30) Ababhalisile be-YouTube abangu-300 ($ 45) Ababhalisile be-YouTube abangu-500 ($ 60) Ababhalisile be-YouTube abangu-1000 ($ 100) Ababhalisile be-YouTube abangu-2000 ($ 180)
Izikhungo Amazwana we-YouTube Custom 10 ($ 20) Amazwana we-YouTube Custom 20 ($ 35) Amazwana we-YouTube Custom 30 ($ 50) Amazwana we-YouTube Custom 50 ($ 80)
Kuthenjwa yi-500,000 + Amakhasimende
Bona ukuthi amakhasimende ethu athini ngama-YTPals
Ngithenge Ukubukwa kwe-YouTube, ukuthandwa kanye nababhalisile besiteshi sami futhi baletha konke kanye namanye amabhonasi mahhala! Ngizobe ngisebenzisa ama-YTPals kaningi!
Ngiyabonga kakhulu ama-YTPals
Ngiyabonga kakhulu ama-YTPals, ngifisa sengathi nginganinika izinkanyezi eziyi-10. Ngiyanithanda nonke, nomsebenzi omuhle eniwenzayo.
Ama-YTP, ngibonga kakhulu ngosizo lwakho, wenze isiteshi sami sakhula amahlandla aphindwe kathathu njengoba sasinjalo lapho ngiqala ukusebenza kwakho kwamahhala. Ngisuka nje ngaphansi kwe100 Subs ngaya ngaphezulu kwe-300 esikhathini samaviki ambalwa!
Joyina inethiwekhi yethu yabanikazi besiteshi se-YouTube abaphumelele abangama-500,000 abathola ababhalisile be-YouTube mahhala ukusiza ukukhulisa isiteshi sabo se-YouTube.
Thola Ababhalisile Abakhululekile Manje!
I-YTpals iyisixazululo esiholayo sokuSakaza i-Social Media yeziteshi zebhizinisi nezama-YouTube. Sisiza amakhasimende ethu ukuthola ababhalisile abaningi, ukubukwa, ukuthandwa kanye namazwana ukukhulisa umthelela wabo ku-inthanethi.
Copyright © 2022 YTpals (ytpals.com). Wonke Amalungelo Agodliwe. Ibalazwe
Amathiphu Wokuhlela Ishejuli Yakho Yokushicilela ye-YouTube
Isiphi Isikimu Semibala Esihle Sesiteshi sakho se-YouTube?